Gulufka dagaal ee GURICEEL ku wajahan oo gaabis uu ku yimid - Maxa isbeddelay? - Caasimada Online
Home Warar Gulufka dagaal ee GURICEEL ku wajahan oo gaabis uu ku yimid –...
Gulufka dagaal ee GURICEEL ku wajahan oo gaabis uu ku yimid – Maxa isbeddelay?
Guriceel (Caasimada Online) – Hal toddobaad ayaa laga jooggaa tan iyo markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug ay billaabeen inay u jiheystaan dhinaca Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Labada ciidan ayuu qorshahoodu yahay inay magaalada ka saaraan Xoogaga Ahlu Sunna, oo 1-dii bishan bilaa dagaal kula wareegay gacan ku haynta magaaladaasi.
Ciidamada ayaa la soo sheegaya inay ku sugan yihiin goob aan ka fogayn Tuulo Sadiiq, oo hal habeen ka hor ay gaareen. Tuuladan ayaa ku taala jidka u dhaxeeya Guriceel iyo deegaanka Ceeldheere, oo 30km dhinaca koonfureed kaga beegan Magaalada Dhuusamareeb.
Hawlgalka ciidamada oo gaabis badan uu ka muuqanayo ayaa loo aaneynayaa iyadoo Xoogaga Ahlu Sunna la tuhunsan yahay inay ka ag-dhow yihiin goobaha ay ciidamada ku safrayaan.
Xoogaga Ahlu Sunna ayaa lagu arkayaa gudaha Magaalada Guriceel iyo wadooyinka soo galaba, iyagoo sidoo kalena bannaanada magaaladaasi ka sameystay dhufeysyo waaweyn.
Colka ku sii jeeda Guriceel ayaa dadka deegaanka ku khasbay in intooda badan ay isaga barakacaan guryahooda, iyagoo gaaray miyiga fog ee Guriceel.
Sidoo kale waxaa hakad-galay goobihii waxbarashada iyo ganacsigii ka jiray magaaladaasi, sababo ku aaddan dadka oo ka baxsanaya in lagu dul dagaalamo.
Cabdulqaadir Jaamac Tarabi oo ka mid ah Maamulada Iskuulada Guriceel ayaa sheegay in xiisadda ka taagan gobolka ay saamayn weyn ku yeelan doonto, kaalmihii hore ee ardayda Galmudug ka geli jireen Imtixaanaadka Shahaadiga ee Dowladda Federaalka qaaddo.
Sida uu sheegay Guriceel iyo bannaanadeeda waxaa ku yaala illaa afartan iskuul, oo ay wax ka baraneysay toban kun oo arday, arrinta walaaca ku haysana ay tahay hubinta la’aanta ka jirta gobolkaasi.
“Inkastoo hadda waqti kooban ay tahay waqtiga waxbarashada hakadka ku jirto, laakiin midda walwalka nagu haysaa waxay tahay waqtiga ay dhammaanayso colaaddaan ayaynaan garanayna” ayuu yiri Cabdulqaadir Jaamac Tarabi oo la hadlay BBC.
Odayaasha Dhaqanka ee Galmudug ayaa in badan ka digay xiisadda ka jirta gobolka, iyadoo ay qaarkood ku baaqeen in wada hadalo lagu dhammeeyo, waxaase mooddaa in dhegaha laga fureystay baaqyadoodaasi, inkastoo Hoggaanka Ahlu Sunna ay sheegeen inay diyaar u yihiin wada hadalo ay la galaan Galmudug, dagaal-na aanay doonayn in lagu khasbo mooyee.
Sidoo kale, wakiilada Beesha Caalamka oo shalay la hadlay madaxweyne Qoor Qoor ayaa kula taliyey inuu sameeyo wax kasta oo looga baaqsan karo dagaal ka dhaca Galmudug, gaar ahaan magaalada Gurceel, iyagoo ka digay in hadii uu dagaal qarxo uu saameyn ku yeelan doono dhinacyo badan oo geedi socoda doorashooyinka dalka ay ugu horeyso.